Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle 4.2.21 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.2.21 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle
Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အားလုံးသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား အဘို့အ Discover အရည်အသွေးကိုအကြောင်းအရာ - ကိုယ်ပိုင်သတင်းများ, ဖျော်ဖြေရေး, နည်းပညာနှင့်အားကစားဆောင်းပါးများကနေလူနေမှုပုံစံစတဲ့မဂ္ဂဇင်းယိမှ။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်, ဖြစ်ရပ်များနှင့်, သင်အချိန်ကုန်သက်သာအသိပေးသငျသညျစောငျ့ရှောကျနှငျ့သငျဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့အတူအမြဲ Up-to-date ဖြစ်အောင်နေသေချာစေရန်ဖျော်ဖြေရေးပုံပြင်များကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။
မဖြစ်မနေဖတ်ပုံပြင်များနှင့်စူးစမျးရှာဖှေရေးမပွုရသေးသောကျောက်မျက်စိတ်ကြိုက်ကယ်နှုတ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အယ်ဒီတာများနှင့်စမတ် algorithms ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပေါင်းစပ်ခိုလှုံပါ၏။ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအပေါ်အပြည့်အဝရှုထောင့်ကိုရယူပါ - နှငျ့သငျတှေ့ရသောအရာကိုမျှဝေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အယ်ဒီတာများရောစပ်ကျွမ်းကျင်သူအသံနှင့်ပြတိုက်မှူးသတင်းရင်းမြစ်, သူတို့သည်သင်တို့ကိုပြန်ထိုင်နှငျ့သငျဖို့အရေးအပါဆုံးမှတဆင့်လှန်နိုင်အောင်, သင်သည်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်ကိုသိပင်အကြံပြုပုံပြင်များ။
သင်ပင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းစင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်: သင်၏ကိလေသာကောက်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီခေါင်းစဉ် feed ကိုတစ်စမတ်မဂ္ဂဇင်းဖန်တီးပါ။ သငျသညျကမ်ဘာသတင်းများ, ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်နည်းပညာတိုးတက်မှုများအတွက်စိတ်ဝင်စားပါသလား? အမျိုးသားသတင်းစာများမှဆောင်းပါးများကိုဖတ်ပါအားကစား podcasts တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းယူသွားလိုပါသလား? လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပုံပြင်တွေယိကနေနံပါတ်သိမ်းယူရန်ရှာဖွေနေပါသလား Flipboard သငျသညျဖုံးအုပျခဲ့သညျ။
Plus အား, သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဂ္ဂဇင်းဖန်တီးနိုင်: သင်အကြာတွင်ဖတ်ချင်သို့မဟုတ်သင်မျှဝေချင်ဆောင်းပါးတွေကိုရှာဖွေ, သင်၏ကိုယ်ပိုင်မဂ္ဂဇင်းများသို့သူတို့ကိုငါလှန်ရန် "+" ကိုအသုံးပြုပါ။
•ဒေသခံအမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ, The New York Times, National Geographic, Vanity Fair နှင့်ပိုပြီးထောင်ပေါင်းများစွာထိပ်တန်းသတင်းစာများနှင့်မဂ္ဂဇင်းများအနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း ရှာဖွေရန်
•သင့်စမတ်မဂ္ဂဇင်းများ Create နှင့်စိတ်ကြိုက် : အမှန်တကယ်စိတ်ကြိုက်သတင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့အတူတကွအရင်းအမြစ်, လူတွေနှင့်ပင် hashtags ကို bundle
• သင့်အိမ် feed ကို Customize: အတူတူသင်နှစ်သက်သော features တွေအမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်အဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံးစမတ်မဂ္ဂဇင်းများ၏9အထိ collate
•ဖတ် The Daily Edition ကို : နောက်ဆုံးပေါ်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အတူတက်ထားအရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်သတင်းဆောင်းပါးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ် roundup အတွက်ဖြစ်ရပ်များယိ
•သင့်ရှုထောင့် Curate : တိကျတဲ့ themes များတဝိုက်ပုံပြင်များစုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဂ္ဂဇင်းများမှသူတို့ကို add
Flipboard ON TOP ညော:
သင်အကြိုက်ဆုံးကြေညာသူနှင့်သတင်းစာများသည်ဤအမျိုးအစားကိုဖြတ်ပြီး Flipboard အပေါ်ထည့်သွင်းထားပါသည်:
- သတင်း & နိုင်ငံရေး: The New York Times, CNN နိုင်ငံရေး, Axio တူသောသတင်းစာများနှင့်စာပမြေားအတူအမျိုးသားရေးနှင့်ကမ္ဘာကသတင်းများတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ
- Tech မှ & သိပ္ပံ: က Wired နှင့်အတူသိပ္ပံဇာတ်လမ်းများယိ, TechCrunch နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသတင်းဖတ်နှင့်ပိုပြီး
- စီးပွားရေး & Entrepreneurship: The Wall Street Journal, Bloomberg သတင်းဌာန, Forbes မဂ္ဂဇင်းကနေသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားမှသက်ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်သတင်းရ
- အားကစား: အမျိုးသားရေး pastime သို့မဟုတ်ကမ္ဘာကြီးသတင်းများ, ESPN, CBS အားကစားနှင့်အတူ key ကိုအားကစားဖြစ်ရပ်များလက်လွတ်ဘယ်တော့မှ
- ဖျော်ဖြေရေး: ပင်နာမည်ကြီးတွေနဲ့လူတွေက Rolling Stone, အရောင်းသွက်နှင့်အတူဖျော်ဖြေရေးအဘို့, ကမ္ဘာ့သတင်းရ
- လူနေမှုပုံစံ & ကျန်းမာရေး: Brit + Co. , ကိုယ်ပိုင်, အမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုစူးစမ်း
- အစားအသောက် & ဟင်းချက်: ဘွန်အစာစားချင်စိတ်, စားနပ်ရိက္ခာ & ဝိုင်, ပြင်းထန်စားဟင်းလျာများထံမှအချို့သောအလေးအနက်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှု get
- ခရီးသွား: National Geographic, ခရီးသွား + Leisure, Lonely Planet, Afar နှင့်သင်၏ wanderlust အစာကျွေး
- ပင်မစာမျက်နှာ & ဥယျာဉ်: သင်၏စံပြနေအိမ် ELLE အလှဆင်, တင့်တယ်အိမ်တက်အိပ်မက်မက်
- ပုံစံ: တစ်ခုအစွန်းနှင့်အတူ Avant-garde သို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ် ... Vogue, Refinery29, W မဂ္ဂဇင်း, GQ ကနေ sartorial လှုံ့ဆော်မှု get
ကုန်ပစ္စည်းနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့် Flipboard နှင့်သရုပ်ဆောင်များကို, စာရေးဆရာများ, ဂီတသမားများနှင့်ထို့ထက် ပို. တွေ့ဆုံမေးမြန်းသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုပေါ်အကြံပေးချက်များအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ကနေနောက်ဆုံးပေါ်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်သည်။ အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow:
Flipboard သုံးစွဲဖို့မည်ကဲ့သို့ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများအဘို့, https://about.flipboard.com/tutorials/ သွားရောက်ကြည့်ရှု။
အဆိုပါ Flipboard app ကို အသုံးပြု. အကူအညီလိုအပ်နေပါသလား? ထို့နောက်အကူအညီ & တုံ့ပြန်ချက်က Settings ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဆောင်းပါးများကို Browse ။ သို့မဟုတျ, flip.it/help မှာအဆက်အသွယ် button ကို click လုပ်ပါ။
Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle အား အခ်က္ျပပါ
mark8 စတိုး 1.13M 551.24M
Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.2.21
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.flipboard.com/privacy
Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ